Coronavirus wuxuu ku bogsaday 8 dal
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Safarka » Coronavirus wuxuu ku bogsaday 8 dal
Airlines • Belgium War Deg Deg Ah • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Cambodia Breaking News • Wararka Shiinaha • Education • Finland War Cusub • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Wararka Hindiya • Wararka Raaxada • Shirka Warka Warshadaha • Shirarka • Wararka Nepal • News • Dadka • jiga • Ammaanka • Wararka Spain • Wararka Sri Lanka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka UK • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Waa maxay meelaha safarka ee ka badbaadsan Coronavirus?
Fayrasku waxa uu dalool muuqda geliyey warshadaha safarka, in kasta oo waddammada adduunka intooda badan aanay lahayn kiisas fayraska. Ururka Caafimaadka Adduunku marnaba ma soo jeedin in la xidho xuduudaha oo laga abuuro argagax kuwa doonaya inay sahamiyaan adduunka.
Saynis yahanadu waxay shaqeeyaan habeen walba si ay u helaan daawo iyo tallaal COVID-19, oo sidoo kale loo yaqaan coronavirus. Iyada oo 68,386 xaaladood oo COVID-19 ah gudaha Shiinaha oo keliya iyo 1894 ay dhinteen, waa war wanaagsan kaliya maahan socdaalka iyo warshadaha dalxiiska in 8 waddan ay awoodeen inay tirtiraan oo ay daaweeyaan kuwa u bukooday fayraska.
Akhbaarta wanaagsan ayaa ah, Shiinaha ayaa soo sheegay 143 dhimasho oo fayras ah iyo hoos u dhac ku yimid kiisas cusub shalay halka madaxa Ururka Caafimaadka Adduunka uu ammaanay dadaalka waddanku ugu jiro xakameynta cudurka cusub, isagoo sheegay inay "iibsadeen waqtiga adduunka" iyo in waddamada kale ay tahay inay sameeyaan ugu badan.
Dhanka kale Faransiiska ayaa soo sheegay geeridii ugu horreysay ee Yurub ee fayraska cusub, dalxiise Shiinees ah oo ka yimid gobolka Hubei, halkaas oo cudurku ka soo baxay bishii Diseembar. Mareykanka ayaa isku diyaarinayay inuu u duuliyo rakaab Mareykan ah gurigooda kuwaas oo lagu karantiilay markabka dalxiiska ee xeebaha Japan.
Hindiya, Ruushka, Isbaanishka, Cambodia, Nepal, Belgium, Sri Lanka, Finland dhamaantood waxay diiwaan geliyeen kiisas Coronavirus ah waxayna awoodeen inay ka takhalusaan fayraska dalalkaas.
Waxay u baahan tahay edaab iyo go'aan iyo mararka qaarkood tas-hiilaadka caafimaad ee ugu sarreeya si tan loo sameeyo.
Dalxiiska waa ganacsi weyn oo ka jira qaar ka mid ah wadamada ay dhibaatadu saameysey. Ciribtirka iyo takoorka ka dhanka ah dalxiisayaasha ka imaanaya wadamada qaarkood waxaa laga yaabaa inaysan mar walba fure u noqonin khatarta fayraskan.
Cambodia shalay uun bay tidhi waas soo dhaweynta dalxiisayaasha ka yimid Shiinaha oo leh gacmo furans oo lagu dhiirigeliyay hudheelada inay bixiyaan qiime saaxiibtinimo oo gaar ah booqdayaasha Shiinaha.
Nepal waxay ku socotaa dhamaanba bandhigga ganacsiga socdaalka ee ITB ee soo socda ee Berlin. Wadanku ma joojinayo u dabaaldega sanadkooda Nepal 2020, oo ah sanad gaar ah oo kor loogu qaadayo dalxiiska. Guddiga Dalxiiska ee Nepal oo ay weheliyaan safaaradda Nepal ee Berlin waxay horey u diiwaan gashadeen ku dhawaad ​​​​200 oo iibsadaha ugu sarreeya iyo saaxiibada Nepal si ay uga qayb qaataan Habeenka Nepal waxaa soo qabanqaabiyay eTN Maarso 5 Magaalada Lagenhaus ee magaalada Berlin ee dalka Jarmalka. Akhristayaasha ee eTurboNews waxaa lagu casuumay in ay u dabaal dagaan dalxiiska iyo meel aan Corona ka jirin.
Iska diiwaan geli habeenka Nepal ee Berlin ee ITB
Sri Lanka, ciribtirka Coronavirus sidoo kale waa war wanaagsan maadaama waddanku wali ka soo kabanayo dhacdo argaggixiso bishii Abriil 2019, oo ay ku dhinteen in ka badan 40 booqdayaal. Sirilaanka waxay hadda bixisaa fiisooyin dalxiis oo bilaash ah. Kooxda huteelada ee Sri Lanka Huteelada Jetwing kaliya waxay ku soo dhaweeyeen martidoodii ugu horeysay ee cusub ee la furay Jetwing Kandy Gallery Resort.
Vegan-Cunto-ka-lagu- adeego-Jetwing-Ayurveda-Pavilions, Sri Lanka
Nasiib darro, tani waxay noqon kartaa war wanaagsan oo keliya dhowr iyo waqti xaddidan sida Narasimhan, oo ah maamulaha shirkadda dawooyinka Swiss Novartis, u sheegay CNBC: "Xaqiiqdu waxay tahay, waxay qaadan doontaa sannad ka badan rajadayda inaan runtii helo tallaal cusub tan. , waxaan u baahanahay inaan si dhab ah u isticmaalno kontaroolada cudurrada faafa si aan runtii xaaladdan u helno meel ka wanaagsan.
Waqtigan xaadirka ah, fayrasku wuxuu ka shaqeeyaa wadamada soo socda iyadoo tiro kiisas ah la diiwaan geliyay. Tirada dhabta ah ee dadka jirran ayaa laga yaabaa inay ka badan tahay sababtoo ah xaaladaha qaarkood ee fayrasku waxay la mid yihiin hargab fudud oo laga yaabo in aanay garanayn kuwa cudurka qaba, inkastoo ay yihiin kuwo la kala qaado.
Kuuriyada Koonfureed (28)
Badbaadada dalxiisku waxay qabanqaabinaysaa dhacdo quraac ah oo daqiiqaddii u dambaysay ka socotay bandhigga ganacsiga ITB ee Berlin, Jarmalka. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan sida looga qaybgalo: http://safertourism.com/coronavirus/
Guji si aad u gasho doodda
Nabadgelyo -doon Waxa kale oo ay siisay webinarro gaar ah Dr. Peter Tarlow, oo ah khabiir caan ku ah socdaalka iyo badbaadada dalxiiska. Dr. Tarlow waxa kale oo uu wax ka dhigaa dugsi caafimaad oo uu wax ku bartay Coronavirus. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan sida shirkad ama meesha ay u socoto ay u geli karto isgaarsiinta https://safertourism.com/qa/